Al-shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo ku Dagaalamay Marka – Radio Daljir
Agoosto 22, 2018 5:12 b 1
Dagaal culus ayaa saakay ka qarxay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada hoose waxaa uu dhexmaray ciidamo katirsan dowladda iyo Al-shabaab.
Janeraal Cabdulaahi Cali Caanood oo ah abaan duuliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka ayaa hogaaminayay dagaalkan, oo ka dhacay saldhigga booliska ee magaalada xooggiisa.
Khasaaraha dagaalka wali lama oga.
Wararka qaar ayaa sheegaya dagaalka inuu yahay mid arrim qabiil ay salka ku hayaan, iyadoo Janeraal Caanood uu hogaaminayo ciidamo u badan beeshiisa oo katirsan ciidamada dowladda.
ALSHABNA HALKAAS KA AG RAADI.
WAA QANDARAASLEYAAL LOO SAMAYSTAY CEEBAYNTA DIINTA ISLAAMKA & IN LAGU BURBURIYO DUNIDA ISLAAMKA.